Ihe Job sara Jehova (1-6)
A baara ndị enyi Job atọ mba (7-9)
Jehova mere ka Job bụrụkwa ọgaranya (10-17)
Ụmụ Job ndị nwoke na ndị nwaanyị (13-15)
42 Job gwaziri Jehova, sị: 2 “Ugbu a, amatala m na i nwere ike ime ihe niile. E nweghị ihe ọ bụla i bu n’obi ime nke ị na-agaghị emeli.+ 3 Ị sịrị, ‘Ònye bụ onye a nke na-agba otú m si eme ihe ụkwụ n’agbanyeghị na e nweghị ihe ọ ma?’+ N’eziokwu, m kwuru okwu n’aghọtaghịIhe ndị juru m anya, bụ́ ihe ndị m na-amaghị.+ 4 Ị sịrị, ‘Biko, gee ntị, m ga-ekwu okwu. M ga-ajụ gị ajụjụ, ị ga-azakwa m.’+ 5 Ntị m anụla banyere gị. Ma ugbu a, eji m anya m na-ahụ gị. 6 Ọ bụ ya mere m ji asị na ekwukwaghị m ihe m kwuru.+ Anọzi m ọdụ n’ájá nakwa ná ntụ iji gosi na echegharịala m.”+ 7 Mgbe Jehova gwachara Job okwu ndị a, Jehova gwara Elifaz onye Timan, sị: “M na-ewesa gị na ndị enyi gị abụọ ezigbo iwe+ maka na unu ekwughị eziokwu banyere m+ otú ohu m Job kwuru. 8 Ugbu a, kpụrụnụ oké ehi asaa na ebule asaa gakwuru ohu m Job, chụọkwanụ àjà a na-esu ọkụ maka mmehie unu. Ohu m Job ga-ekpere unu ekpere.+ M ga-anụ arịrịọ ọ ga-arịọ m ka m ghara ime unu ihe m kwesịrị ime unu maka nzuzu unu zuzuru, n’ihi na unu ekwughị eziokwu banyere m otú ohu m Job kwuru.” 9 Elifaz onye Timan, Bildad onye Shua, na Zofa onye Neama* gara mee ihe Jehova gwara ha ka ha mee. Jehova nụrụ ekpere Job. 10 Mgbe Job kpechaara ndị enyi ya ekpere,+ Jehova mere ka Job kwụsị ịta ahụhụ,+ meekwa ka ọ bụrụghachi ọgaranya. Jehova nyere ya ihe niile o nweburu okpukpu abụọ.+ 11 Ụmụnne ya ndị nwoke niile na ụmụnne ya ndị nwaanyị niile na ndị niile bụ́bu ndị enyi ya+ bịakwutere ya soro ya rie nri n’ụlọ ya. Ha sịrị ya ndo ma kasie ya obi maka nsogbu niile Jehova kwere ka ha bịara ya. Onye ọ bụla n’ime ha nyere ya otu mkpụrụ ego na otu mgbaaka ọlaedo. 12 Jehova gọziri ngwụcha ndụ Job karịa mmalite ya.+ Job wee nwee puku atụrụ iri na anọ (14,000), puku kamel isii (6,000), puku ehi abụọ (2,000),* na otu puku (1,000) nne jakị.+ 13 Ọ mụkwara ụmụ nwoke asaa ọzọ na ụmụ nwaanyị atọ ọzọ.+ 14 Ọ gụrụ nwa ya nwaanyị nke mbụ Jimaịma, gụọ nke abụọ Kezaya, gụọ nke atọ Kerin-hapọk. 15 N’ala ahụ niile, e nweghị ụmụ nwaanyị mara mma ka ụmụ Job ndị nwaanyị. Nna ha kenyekwara ha ihe otú o kenyere ụmụnne ha ndị nwoke. 16 Mgbe ihe ndị a mechara, Job dịrị ndụ otu narị afọ na iri anọ (140). Ọ hụkwara ụmụ ya na ụmụ ụmụ ya, ruo ọgbọ nke anọ. 17 Job nwụziri mgbe o merela ezigbo agadi, ndụ ya jukwara ya afọ.
^ Na Hibru, “ehi abụọ abụọ dị ụzọ otu puku.”